Blackmagic Design မှ ATEM Mini Pro ISO အသစ်အားကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic Design မှအသစ် ATEM Mini Pro ISO ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Fremont, CA, USA - ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၂၀ - Blackmagic ဒီဇိုင်း ပွဲကိုအပြီးတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုတည်းဖြတ်ခွင့်ပြုသည့်ဗီဒီယိုထည့်သွင်းမှုအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့် ၅ စီးစီးကူးနိုင်သောအင်ဂျင်ပါ ၀ င်သောတန်ဖိုးနည်းသော live ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်သစ် ATEM Mini Pro ISO ကိုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအရာသည်အသုံးပြုသူများအားသွင်းအားစုများအားလုံးအတွက်သန့်ရှင်းသောအစာကျွေးခြင်းနှင့်နောင်တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်တည်းဖြတ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ် multi-cam လုပ်ဆောင်ချက်များကိုခွင့်ပြုသည်။ ATEM Mini Pro ISO သည်အသံဖိုင်များ၊ မီဒီယာရေကူးကန်ဂရပ်ဖစ်များနှင့် DaVinci Resolve စီမံကိန်းဖိုင်အားလုံးကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုတစ်ချက်တည်းနှိပ်ရုံဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။
ATEM Mini Pro ISO ကိုချက်ချင်းရရှိနိုင်သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း အမေရိကန် $ 895 များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
ATEM Mini switchchers များသည် YouTube သို့တိုက်ရိုက်လွှင့်ရန်နှင့် Skype နှင့် Zoom ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းသစ်သောစီးပွားရေးတင်ဆက်မှုများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။ ရိုးရှင်းစွာ ဆက်သွယ်၍ ATEM Mini ကိုအသုံးပြုပြီးဖောက်သည်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရုပ်ပုံများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုကင်မရာထည့်သွင်းမှု (၄) ခုကြားတွင်တိုက်ရိုက်ပြောင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် PowerPoint ဆလိုက်သို့မဟုတ်ဂိမ်းစက်များအတွက်ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်ပါ။ built-in DVE သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်ကိုဓာတ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဗွီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ ATEM Mini မော်ဒယ်အားလုံးတွင် USB ကင်မရာကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည် streaming software ကိုသုံးနိုင်သည်။ ATEM Mini Pro model သည် live streaming နှင့် USB disk များထဲသို့မှတ်တမ်းတင်သည်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် HDMI ပရိုဂျက်တာထွက်သည်။ မိုက်ကရိုဖုန်းထည့်သွင်းမှုများသည်အင်တာဗျူးများနှင့်တင်ပြချက်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်သော desktop နှင့် lapel mics များကိုခွင့်ပြုသည်။
ATEM Mini ၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုအားလုံးတွင်ဒီဇိုင်းတစ်ခုတွင် control panel နှင့် connection များပါ ၀ င်သည်။ ရှေ့ panel တွင်ရင်းမြစ်များ၊ ဗီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများကိုရွေးချယ်ရန်လွယ်ကူသောခလုတ်များပါဝင်သည်။ ATEM Mini Pro မော်ဒယ်တွင်ဖောက်သည်များသည်မှတ်တမ်းနှင့် streaming ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ခလုတ်များအပြင်ကင်မရာများ၊ ပရိုဂရမ်နှင့် multiview အကြားဗွီဒီယို output ကိုပြောင်းလဲစေသည့် output selection ခလုတ်များကိုလည်းရရှိသည်။ နောက်ဘက် panel မှာရှိပါတယ် HDMI ကင်မရာများ (သို့) ကွန်ပျူတာများအတွက်ဆက်သွယ်မှုများ၊ အပိုမိုက်ခရိုဖုန်းထည့်သွင်းမှုများ၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာအတွက် USB၊ HDMI ပရိုဂရမ်ဗီဒီယိုအတွက် "aux" output ကို။
ဤပုံစံသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီသီးခြား H.5 ဗီဒီယိုစီးဆင်းမှု ၅ ခုအထိမှတ်တမ်းတင်သည်။ ၎င်းသည်သွင်းအားစုများအားလုံးအတွက်သန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်ပြီးအပေါင်းတိုက်ရိုက်အစီအစဉ်။ DaVinci Resolve စီမံကိန်းဖိုင်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းထားပါသည်။ သို့မှသာဖောက်သည်များသည်သူတို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းအသံနှင့်အရောင်ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ATEM Mini Pro ISO မော်ဒယ်လ်သည်သုံးစွဲသူများအားသူတို့၏တိုက်ရိုက်အဖြစ်အပျက်ကိုတည်းဖြတ်ခွင့်ပေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်းသည်သွင်းအားစုအားလုံး၏သန့်ရှင်းသောထည့်သွင်းမှုနှင့်ပရိုဂရမ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဗီဒီယိုစီးကြောင်း ၅ ခုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသောမီဒီယာအစုအဝေး၏ရုပ်ပုံများကိုဗွီဒီယိုဖိုင်များဖြင့်လည်းသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဗီဒီယိုဖိုင်များတွင်စည်းညှိထားသော timecode နှင့်ကင်မရာနံပါတ်များကဲ့သို့ metadata tags များပါဝင်သည်။ သူတို့ရဲ့ပြပွဲကိုအရောင်အဆင့်၊ အထူးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဂရပ်ဖစ်အသစ်များဖြင့်ပြန်လည်တည်းဖြတ်မည်ဆိုပါစို့။ အသံအရင်းအမြစ်များကိုတောင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတွက်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏အသံကိုပညာရှင်ပီသစွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ATEM Mini Pro ISO မော်ဒယ်သည် DaVinci Resolve စီမံကိန်းဖိုင်ကိုလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ဖောက်သည်များသည်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းအနေဖြင့်သူတို့၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်မီဒီယာရေကူးကန်ဂရပ်ဖစ်များအားလုံးတင်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖောက်သည်များသည်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်သည့်အချက်များကိုညှိနှိုင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရိုက်ချက်များကိုလုံးဝအစားထိုးနိုင်သည်။ DaVinci Resolve Sync Bin သည်သုံးစွဲသူများသည် multiview မှတစ်ဆင့်အသစ်သောဓာတ်ပုံများကိုရွေးချယ်နိုင်အောင်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သုံးစွဲသူများသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အပြီးသတ်ခြင်းအတွက် Blackmagic RAW ကင်မရာဖိုင်များကိုပင်ဆက်သွယ်နိုင်သည် က Ultra HD.
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ဗီဒီယိုရင်းမြစ်များအကြားဖြတ်တောက်ရန်ရှေ့ဘောင်တွင် 1 မှ4အမည်တပ်ထားသောမည်သည့် input ခလုတ်ကိုမဆိုရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောခလုတ်ခုံမရှိပါ။ ဖောက်သည်များသည်ဖြတ် (သို့) အလိုအလျောက်ခလုတ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြတ် (သို့) အသွင်ကူးပြောင်းမှုများအကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ cut နှင့်မတူပါက auto ခလုတ်သည် input မ်ားပြောင်းသောအခါဗီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုရန် ATEM Mini ကိုပြောထားသည်။ ဖောက်သည်များသည်ပျော် ၀ င်မှုကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများ (သို့) အရောင်မှ dip၊ DVE ညှစ်ခြင်းနှင့် DVE တွန်းအားကဲ့သို့ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ DVE သည်ပုံရိပ်သက်ရောက်မှုအတွက်ရုပ်ပုံအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ဖောက်သည်များသည်ကွဲပြားသောရုပ်ပုံအနေအထားကိုချက်ချင်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။
4 လွတ်လပ်သောနှင့်အတူ HDMI သွင်းအားစုများ၊ ဖောက်သည်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုကင်မရာ ၄ ခုအထိချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောဗွီဒီယိုစံနှုန်းများနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ပါကဗီဒီယိုရင်းမြစ်အားလုံးသည် switch ကိုပြန်လည်စည်းညှိလိမ့်မည်။ သို့မှသာဖောက်သည်များအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ထုတ်ကုန်များကိုချိတ်ဆက်ရန်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ပြဇာတ်ရုံထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၊ ကျောင်းဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်တေးဂီတဗီဒီယိုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကင်မရာများ၏အလင်းစွမ်းရည်နိမ့်ကျမှုကိုအသုံးချနေသည်ဆိုပါစို့။
ATEM Mini Pro model သည် Ethernet connection မှတစ်ဆင့် live streaming အတွက် hardware streaming အင်ဂျင်ပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသုံးစွဲသူများသည် YouTube, Facebook နှင့် Twitch သို့တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်နိုင်သည့်ရုပ်ပုံများကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ၊ ရိုးရှင်းသောချိန်ညှိချက်များဖြင့်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်သည်။ streaming service ကိုသာရွေးပြီး streaming key ကိုရိုက်ပါ။ streaming များတပ်ဆင်ရန်အတွက် ATEM ဆော့ဝဲလ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် palette များရှိပြီး၊ multiview တွင် streaming status ကိုလည်းပြသထားတယ်။ streaming အခြေအနေကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဒေတာနှုန်းညွှန်ကိန်းသည်သုံးစွဲသူများအသုံးပြုနေသောဗီဒီယိုပုံစံအတွက်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ATEM Mini Pro မော်ဒယ်လ်သည်၎င်းတို့၏ streaming အချက်အလက်များကို USB flash disk များသို့တိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ရန်လည်းအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဖောက်သည်များထုတ်လွှင့်သည့် AAC audio နှင့်အတူ H.264 ဗီဒီယိုဖိုင်များစွာတွင်ရှည်လျားသောအသံသွင်းချက်များကိုရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဖောက်သည်များသည် YouTube နှင့် Vimeo ကဲ့သို့သောမည်သည့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဆိုဒ်သို့မဆိုတင်ပို့နိုင်သည်။ ATEM Mini Pro သည် USB hub သို့မဟုတ် Blackmagic MultiDock နှင့်အသုံးပြုသောအခါမျိုးစုံ disk များကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့ကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုဖြည့်သည့်အခါ disk သည်ဆက်လက်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိသောဒုတိယ disk သို့ဆက်သွားနိုင်သည်။ Record settings နှင့် disk selection ကို ATEM Software Control တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး multiview တွင်ထည့်သွင်းထားသော record status view ရှိသည်။
အများဆုံးသဟဇာတဖြစ်မှုကိုသေချာစေရန်, ATEM Mini သည်ရိုးရှင်းသော webcam အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် USB connection တစ်ခုပါရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသုံးစွဲသူများသည်မည်သည့်ဗွီဒီယိုဆော့ဝဲလ်ကိုမဆိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ software သည် ATEM Mini ကိုဘုံကင်မရာဟုထင်မြင်ရန်လှည့်စားခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်သည့်ခလုတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ဗီဒီယိုဆော့ဖ်ဝဲနှင့်မဆိုအပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှုရှိစေပြီးအပြည့်အဝ resolution 1080HD အရည်အသွေးရှိသည်။ ATEM Mini သည် Open Broadcaster၊ XSplit Broadcaster၊ YouTube Live, Facebook Live, Skype, Zoom, Twitch, Periscope, Livestream, Wirecast နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သော software နှင့်ပလက်ဖောင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အဆိုပါ4တစ်ခုချင်းစီ HDMI သွင်းအားစုများဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်စံချိန်စံညွှန်းများ converter ကိုပါရှိပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ ATEM Mini သည် 1080p, 1080i နှင့် 720p အရင်းအမြစ်များကို switcher ၏ video standard သို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလိမ့်မည်။ The HDMI သုံးစွဲသူများသည် switch တစ်ခုချင်းစီကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်သောကြောင့် output သည်စစ်မှန်သော“ aux” output ဖြစ်သည် HDMI ဒီ output ကိုမှ input ကိုသို့မဟုတ် program ကို။ အသုံးပြုသူများသည် program / preview switching ကိုအသုံးပြုနေပါက HDMI out ကို preview ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ATEM Mini Pro မော်ဒယ်တွင် multiview အပြည့်အဝပြသရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ATEM Software Control အက်ပလီကေးရှင်းသည် ATEM Mini ၏လျှို့ဝှက်စွမ်းအားကိုသော့ဖွင့်ပြီး switcher ရှိလုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ATEM ဆော့ဝဲလ်ထိန်းချုပ်မှုတွင်လျင်မြန်စွာချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် parameter palettes ပါသော visual switchcher user interface တစ်ခုပါရှိသည်။ သုံးစွဲသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် USB မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိူင်သော်လည်း၊ ဖောက်သည်များသည် Ethernet ကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါကအသုံးပြုသူများစွာသည်ကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာများပေါ်ရှိသီးခြား ATEM ဆော့ဝဲလ်ထိန်းချုပ်မှုမိတ္တူများကို သုံး၍ ATEM Mini ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
built-in“ media pool” သည်ထုတ်လွှင့်ရန်အရည်အသွေး၊ သီးခြားထုတ်လွှင့်မှုအရည်အသွေး RGBA ဂရပ်ဖစ် ၂၀ အထိအားခေါင်းစဉ်များ၊ အဖွင့်စာမျက်နှာများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ခွင့်ပြုသည်။ ဂရပ်ဖစ်များကို ATEM ဆော့ဝဲလ်ထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့် တင်၍ သော်လည်းကောင်း ATEM Photoshop plug-in ကိုအသုံးပြုပြီး Photoshop မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
သတင်းများအတွက်သို့မဟုတ် On-set တင်ဆက်မှုအတွက် ATEM Mini သည်အထက်ပိုင်း ATEM Advanced Chroma Key အပြင်အောက်ပိုင်း linear keyer ပါသောကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသည်။ သုံးစွဲသူများသည်အစိမ်းရောင် (သို့) အပြာနောက်ခံရှိသောဂရပ်ဖစ်များဖန်တီးခြင်းဖြင့်ခေါင်းစဉ်ထပ်ရန်အတွက်ပင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကီးသည်အစိမ်းကိုခေါက်။ နောက်ခံအားပွင့်လင်းမြင်သာစေလိမ့်မည်။
ကင်မရာအမြောက်အမြားဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုကိုပြုလုပ်သောအခါ၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုရင်းမြစ်များအားလုံးကိုမော်နီတာတစ်ခုတည်းတွင်တစ်ချိန်တည်းကြည့်ရှုရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ATEM Mini Pro မော်ဒယ်လ်တွင်ဗီဒီယိုထည့်သွင်းမှု (၄) ခုစလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်၊ ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုတစ်ခုတည်းပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်များကြည့်ရှုခွင့်ပေးသော Professional multiview ပါဝင်သည်။ HDMI ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်မော်နီတာ။ တစ်ခုချင်းစီကိုကင်မရာမြင်ကွင်းတစ်ခုချင်းစီသည်လေထုထဲတွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရှိကြောင်းသုံးစွဲသူများသိရှိနိုင်ရန်တိကျသောညွှန်းကိန်းများပါ ၀ င်ပြီးတစ်ခုစီတွင်စိတ်ကြိုက်တံဆိပ်များနှင့်အသံမီတာများပါရှိသည်။ သုံးစွဲသူများသည်မီဒီယာဖွင့်စက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် multiview သည်အသံသွင်းခြင်း၊ streaming နှင့် Fairlight audio mixer အတွက်အဆင့်အတန်းပါ ၀ င်သည်။
Fairlight ပါဝင်သည့်အသံရောနှောတပ်ဆင်ထားသည့် ATEM Mini သည်ရှုပ်ထွေးသော live sound ရောနှောခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ Internal Mixer တွင်စုစုပေါင်းချန်နယ် ၁၂ လုံးပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်သတင်းရင်းမြစ်အားလုံးမှအသံများကိုရောနှောနိုင်သည်။ ဒါကအားလုံးထံမှအသံပါပဲ HDMI ရင်းမြစ်များနှင့်2စတီရီယိုမိုက်ကရိုဖုန်းသွင်းအားစု။ input channel တစ်ခုစီတွင်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး6band parametric EQ နှင့် compressor, limititer, expander နှင့် noise gate အပြင် panning အပြည့်ပါ ၀ င်သည်။
“ ATEM Mini ပုံစံသစ်သည်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အသစ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက်တည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင် Blackmagic RAW ပေါင်းစည်းမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာ switcher မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ISO ဖိုင်တွေ, ဒါမှမဟုတ်ကင်မရာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖိုင်တွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ” Grant Petty ကပြောသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း စီအီးအို။ “ ဒါက RAW ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအသွားအလာ၊ ထုတ်လုပ်မှုလွန်လုပ်ငန်းအသွားအလာနဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပေါင်းစပ်ထားတယ်! တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုပါစို့ က Ultra HD အပြည့်အဝအရောင်အဆင့်အလိုက်မာစတာအားလုံးသေးငယ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနေ HD ခလုတ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးမှာပါ။ ”
ATEM Mini Pro ISO အသွင်အပြင်များ
ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုစီကိုသီးခြား ISO ဖိုင်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်ပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
Live ထုတ်လုပ်မှုကို ၁ ကလစ်တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက် DaVinci Resolve ၏စီမံကိန်းဖိုင်သိမ်းသည်။
Ethernet မှတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်မှုကို ATEM Mini Pro တွင်ထောက်ပံ့သည်။
Multiview သည် ATEM Mini Pro ရှိကင်မရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။
ATEM Mini Pro ISO ကိုယခုအခါအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၉၅ ဖြင့်ပြည်တွင်းအခွန်များနှင့်အခွန်များမှအပကျန်ရယူနိုင်ပါသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
ATEM Mini Pro ISO ၏ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံများအပြင်အခြားအရာအားလုံး Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
Conductor တွင်ယခုရရှိနိုင်သည့်အတွက် Cinema 4D နှင့် Redshift အသုံးပြုမှုကိုအခြေခံသည့်လိုင်စင် - သြဂုတ်လ 13, 2020
Dalet CubeNG သည် Broadcast Graphics Workflows များကို Cloud တွင်တင်သည် - သြဂုတ်လ 13, 2020
Elk သည် Real-Time Remote ဂီတဖန်တီးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ် Aloha ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် - သြဂုတ်လ 11, 2020
ယခင်: Bluefish444 သည် Foundry Nuke နှင့် Nuke Studio 8 အတွက် KRONOS K12 အထောက်အပံ့ကို Windows 2020.14.0 Install Package ကိုထည့်သွင်းသည်။
နောက်တစ်ခု: Blackmagic Design မှ ATEM Streaming Bridge အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်